PSA & Nchịkọta ego | Lọ Akwụkwọ Oakleigh na Early Early Intervention Center
Ndị Ọrụ Ndị Ọrụ Nne na Nna (PSA)
Olọ Akwụkwọ Oakleigh na Early Years Center Parent Staff Association (PSA) bụ nzukọ nke ndị nne na nna na ndị ọrụ mejupụtara.
Ndị nne na nna / ndị nlekọta nke ụmụaka na Oakleigh School na Acorn Assessment Center yana ndị ọrụ niile bụ ndị otu na-akpaghị aka na PSA.
PSA na-ahazi ihe omume ma na-akwado ọrụ nchịkọta maka isi ọrụ na ụlọ akwụkwọ. Ihe omume ego na-enye ndi nne na nna, ndi oru ha na umu akwukwo ha ohere ichikota.
Zụta ego bụ ọrụ dị mkpa nke PSA ma a na-eme nke a n'afọ niile n'ọtụtụ ụzọ.
Ozi niile banyere ihe na-abịa ma na-abịa bụ na weebụsaịtị wee zipụ ya site na ọrụ ozi ederede anyị.
Kọmitii PSA na-ekpebi otu esi emefu ego PSA dabere na mkpa ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ arịrịọ a kapịrị ọnụ. Ego PSA welitere bụ iji nye 'mgbakwunye' nke ndị ụlọ akwụkwọ na-akpata ugbu a.
PSA nwere Nzukọ Nzukọ Kwa Afọ nke a na-ahọpụta kọmitii na-achịkwa PSA - nke nwere oche, onye na-echekwa ego, odeakwụkwọ na ndị otu kọmitii nkịtị. Kọmitii PSA na-ezukọkarị otu oge ma a na-akpọ ndị nne na nna na ndị nlekọta niile òkù.
Anyị na-achọ ndị ọhụụ ka ha bịa nzukọ anyị ma ọ bụ sonye na kọmitii ahụ, ebe a na-anabatakarị echiche ego maka ego yana ndị ọhụụ ịkesa ha. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịmatakwu banyere PSA ma ọ bụ otu ị ga - esi tinye aka biko gwaa Bijal Jiwan odeakwụkwọ ụlọ akwụkwọ.
I nwekwara ike ịchọta anyị na Facebook - Oakleigh School PSA Group https://m.facebook.com/groups/1460250597344111 ma ọ bụ zitere anyị ozi na: psa@oakleigh.barnetmail.net. Rịba ama na nke a bụ otu mechiri emechi echedoro, yabụ biko mezue aha na klaasị nwa gị, ụlọ ọrụ ụlọ akwụkwọ ga-edozi ihe ị rịọrọ.
Na Oakleigh na Acorn, anyị na-akụziri ụmụaka nwere ọtụtụ mkpa mmụta na nkwarụ pụrụ iche, gụnyere mkpa anụ ahụ na ahụike na Autism. Nke a na-emetụta oke otu ha si eso ndị ọzọ emekọrịta yana ụwa gbara ha gburugburu.
Usoro ọmụmụ anyị dị ọtụtụ, na anyị na-enye ihe omume, ihe na-atọ ụtọ ma na-akpali akpali iji nyere ụmụaka aka ịmụ na ịzụlite. Anyị na-eji ọtụtụ ọkachamara na nkuzi nkuzi ahaziri iche, akụrụngwa na akụrụngwa iji nyere ụmụaka aka ịzụlite ikike ha kachasị.
Rancezọ mbata na ọdọ mmiri Hydrotherapy
N'ime Plọ Ọdọ Mmiri Hydrotherapy
Agbanyeghị, enwere nrụgide ego mgbe niile, yana ndokwa ọkachamara dị oke ọnụ. Anyị na-anabata onyinye mgbe niile iji melite ndokwa anyị.
Ugbu a anyị na-anwa ị nweta ego maka ọdọ mmiri hydrotherapy ọhụrụ. Mmiri anyị dị ugbu a emeela agadi ma chọọ nnukwu nwughari ọfụma maka ụlọ na ọdọ mmiri n'onwe ya, na nke ọzọ n'ihi mgbanwe mgbanwe nke ụmụ anyị. Ọdọ mmiri anyị ugbu a na-ehi ehi ma nwee ọnụ ọgụgụ ike dị ala. Childrenmụaka anaghị enwe ike ịnweta ọdọ mmiri mgbe niile n'ihi owuwu nke ụlọ ahụ - n'oge oyi n'ihi na ọ nwere ike ịdị oke oyi, n'oge ọkọchị ọ na-adịkwa ọkụ mgbe ụfọdụ.
Hydrotherapy bụ usoro ọgwụgwọ nke ụmụaka nwere nkwarụ anụ ahụ nwere ike ịkwado na mmiri ọkụ iji rụọ ọrụ omume physiotherapy. Maka ụmụ anyị, ọ nwere ike inye ohere iji nweta nnwere onwe karịa n'ọdọ mmiri, ebe ha na-achọkarị ndị ọkachamara maka akụrụngwa iji kwado mkpa ha.
Nakwa iji ọdọ mmiri anyị maka ebumnuche a, anyị na-enye ụmụaka anyị ohere igwu mmiri n'oge (ndị okenye na-egwu mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri buru ibu). Igwu mmiri na hydrotherapy bụ ihe ama ama maka ụmụaka na Oakleigh, anyị na-ahụkwa mmepe nke nka karịa anụ ahụ, dịka nkwukọrịta, nka mmekọrịta mmadụ na nnwere onwe.
Edebara aha anyị na HMRC (Nọmba Onyinye Edebere Aha 802621) iji kwụghachi onyinye enyemaka site na onyinye ndị UK na-akwụ ụtụ isi. Ọ bụrụ na ị na-enye onyinye, biko budata ụdị Nkwupụta Enyemaka Onyinye ma weghachite ya na Oakleigh School.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu ihe ọmụma, biko kpọtụrụ onye ụlọ akwụkwọ.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ inye onyinye na ntanetị, nkọwa akụ PSA bụ:
Lọ Akwụkwọ Oakleigh PSA
Nọmba Akaụntụ: 32943253
Ụdị Usoro: 60-23-36
Ntughari: ọdọ mmiri
Ma ọ bụ jiri thedị Enyemaka na-abụghị.
Mgbasa Ozi ebere PSA
You nụla banyere nbudata ego dị mfe? Ọ bụ ụzọ kachasị mfe iji nyere aka bulie ego maka Oakleigh School Parent Staff Association! Ọ bụrụ n’inwere ndị na - ere ahịa dịka Amazon, M&S, Argos, John Lewis, Comet, Vodafone, eBay, Boden na Play.com, ị ga - edebanye aha n’efu iji bulie ego mgbe ị zụrụ ahịa!
Ya mere olee otu o si arụ ọrụ?
Na ịzụ ahịa ozugbo na ere ahịa dị ka ị ga-ejikari, ma ọ bụrụ na ị banye na School Oakleigh PSA kpatara n'efu ma jiri njikọ dị na saịtị ahụ dị mfe iji kpọga gị na ndị na-ere ahịa, mgbe ahụ pasent nke ihe ọ bụla ị na-emefu na-abịakwute anyị ozugbo na enweghị ụgwọ ọ bụla n'onwe gị!
Download ugbu a maka iPhone, iPad na gam akporo ma bulie ọbụna karịa!
Kedu otu esi enweta ego na-arụ ọrụ vidiyo nke 60
Ọganihu Oakleigh School Parent Staff Association na ọnwa a
£ zụlitere n'ọnwa a
£ zụlitere na ngụkọta
ndị nkwado ọhụrụ n’ọnwa a
ngụkọta ọnụ ọgụgụ nke na-akwado
The AKWKWỌ AKWARKWỌ Web Life
Maka ụlọ oriri na ọ honoredụ honoredụ a na-asọpụrụ ị na-emere maka gị ma ọ bụ na nnọchite onye ọzọ, £ 1 maka KWES dinR din dinLỌ ọ bụla ga-enye onyinye site na ARBARRAR toLỌ toLỌ Akwụkwọ Oakleigh PSA na-akwụ ụgwọ gị.
Debanye na njikọ weebụsaịtị nke dị n'okpuru ma ọ bụ budata ngwa maka ngwaọrụ mkpanaka gị.
Gaa Leta onyinye enyemaka maka ozi ndị ọzọ
Dị ka akụkụ nke Akpụkpọ ụkwụ Ndị Enyi atụmatụ, anyị ka na-achịkọta akpụkpọ ụkwụ achọghị, nke a ga-eziga ya n'Africa ma resị ya ndị chọrọ ha. Ego a ga-enweta ga-aga n'ụlọ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ n'Africa. Biko ziga akpụkpọ ụkwụ niile ị na-achọghị, na-echeta ma ị ga-ekekọta eriri ma ọ bụ tinye eriri na-agbanwe gburugburu ụzọ nke ọ bụla. Maka akpa ọ bụla anakọtara, ụlọ akwụkwọ ahụ na-enweta onyinye.
Gaa Leta ndị enyi akpụkpọ ụkwụ maka ama ndị ọzọ
E debara aha anyị na ya Recyc4Charity nke bụ nzukọ imegharị ihe maka ezi ejiri katọndụ ink na ekwentị ochie, yana ụlọ akwụkwọ na-enweta obere onyinye.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ akpa maka katrijị gị / ekwentị gị ka ị nwee ike iziga ha na Recycle4Chairty ozugbo, biko mee ka ụlọ ọrụ ụlọ akwụkwọ mara, ma ọ bụ naanị ziga ha n’ụlọ akwụkwọ. Biko mara na ha na-ewere ezi cartridges HP, Epson, Canon wdg BỤGHỊ ndị nke e mejupụtara / akara / ụdị dakọtara
Gaa Leta Akpụkpọ ụkwụ Recycle4Chariry